Dawlada oo lagu dhaliilay inayna gargaar ku filan geynin gobolka Gedo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa gobolka Gedo deegaano hoostaga ka taagan abaaro iyo biyo la’aan baahsan waxana dawlada iyo xukuumada lagu dhaliilay inayna wax weyn la gaarin. Abaarta aya ah mid muddo soo socotey laakiin aan laga hiortagin sida loogu gurmaday deegaanada kale.
”Gedo abaar ayaa ka jirta laakiin looma gurman sidii loogu gurmaday gobolada kale ee dalka ayuu yiri Xuseen Warsame. Dadka ay abaartu saamaysay ayaa qaylo dhaan ka direy ayadoo dawlada u direy dalabyo ay ku dalbanayaan gargaar degdega.
”Waxa ugu daran biyo la’aanta taas oo ay ugu wacan tahay sanado badan oo maamul xumo jirto ayna keentay in dalka waxba lala gaari waayo ee maaha biyo la’aan jirta ayuu raaciyay Xuseen Warsame.
Inkastoo waxoogaa loola cararay haddana kuma filna. Abaartan ayaa imaanaysa xilli deegaanada qaar uu dalagii ay sugayeen uu qaaday daad. Waana xilliyada ay gaaladu ugu jecelyihiin ee ay keenaan raashida dhacay.